स्कूलवाट घर फर्कदै गरेकी भगिरथी भागरथी’को न्या ’यको ला’गि रवि लामिछानेको टिम बैतडीमा ! – Sidha Post 24
स्कूलवाट घर फर्कदै गरेकी भगिरथी भागरथी’को न्या ’यको ला’गि रवि लामिछानेको टिम बैतडीमा !
१७ वर्षीया बालिका भागरथी भट्ट को न्या’यको आ’बाज उ’ठाउन’को लागि पत्रकार रबी लामिछाने बैतडी प्रस्थान गरेका छन । भा’गरथी को न्या’य को नि म्ति उ’ठिरहेका आ वा’जहरुला’ई थप ब’ल मि’ल्छ कि भन्दै बैतडी तर्फ जान लागेको उनले फेसबुकमा जानकारी गराएका छन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ को चडेपानीमा त्यस्तै घटना भएको छ । अहिले पुरै गाउँ शोकमा डुवेको छ । गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी माथि भएको घटनाले गाउँलेका आँखाबाट पनि अविरल आँसु बगिरहेका छन। उनीहरुका आँसु रोकिएका छैनन्। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
भागरथीले सबैलाई चटक्कै छोडेर गएको पत्यार लागिरहेको छैन। तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भगीरथीको शव फेला परेको थियो । उनको शवको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उनको कपडा च्या ति ए का छन् भने श रि र मा पनि डा म देखिएका छन् । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
बुवाको किरियामा बसेकी आमालाई भागरथीले नै घरको सबै काममा सघाउने गरेकी थिइन्। तर उनको खुसीमाथि कुन पापीले आँखा लगायो । भागरथीको ब-ला ‘त्का-र पछि ह’ ‘त्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान कार्य गरिरहेपनि न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
स्कू’लवाट घर फर्कदै गरेकी भगिरथी भागरथी’को न्या’यको लागी रवि लामिछानेको टिम बैतडीमा !